यी ९ राशिका लागि अति शुभ छ जेष्ठ महिना, हेर्नुहोस् मासिक राशिफल - Naya Pusta
यी ९ राशिका लागि अति शुभ छ जेष्ठ महिना, हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ १, बुधबार १९:४२
प्रस्तुत छ, २०७६ साल ज्येष्ठ महिनाको राशिफल
मेष : आर्थिक दृष्टिले तपाईको ज्येष्ठ महिना मध्यम फलदायी रहनेछ । भौतिक वस्तुलाभदायी रहनेछन् । अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ । पदोन्नतिका अवसर मिल्नेछन् । अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्त हुनेछ । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ । पारिवारिक सुख मिल्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भने सजग रहनुनै उचित हुुनेछ । खर्चमा पनि वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।
वृष : वृष राशिका लागि ज्येष्ठ महिना यात्रामयी रहने देखिन्छ । धार्मिक कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ । कला मनेरञ्जनमा क्षेत्रमा पनि लगाव रहने देखिन्छ । शत्रुपक्ष निर्वल रहनेछन् । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । आर्थिक उन्नतिका योग देखिन्छन् । व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ । आमदानीका स्रोत बढ्नुका साथै कार्य गर्ने उत्साह पनि मनमा जागृत हुनेछ । व्यवसायमा सफलता मिल्ने देखिन्छ ।
मिथुन : मिथुन राशिका लागि ज्येष्ठ महिना खर्चिले रहनेछ । व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथै सुखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ । अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै विद्या क्षेत्रबाट पनि विशेष लाभ हुनेछ । शत्रु क्षेत्र सबल रहेकाले सजग रहनु नै उत्तम हुनेछ । परिवारको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम छ । धार्मिक कार्यमा मन जाने देखिन्छ ।
कर्कट : कर्कट राशिका लागि यो महिना लाभदायी रहनेछ । शत्रु नाश हुनेछन् । कर्यमा प्रगति हुनेछ । धनको क्षेत्र सबल रहनेछ । मित्रजनबाट भने सजग रहुनु नै उत्तम हुने देखिन्छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र फलदायी रहनेछ । धार्मिक सामाजिक कार्यमा विशेष रुचि रहने छ । यात्राका योग पनि देखिन्छन् ।
सिंह : सिंह राशिका लागि यो महिना सुखद् रहनेछ । आमदानीका स्रोत बढ्नेछन् । आफन्तजनबाट साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । मित्र जनबाट भने सजग रहनु नै उपयुक्त हुने छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सबल रहनेछ । आय आर्जनका अवसरहरू पनि मिल्नछन् । व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने देखिन्छ । धार्मिक सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन् । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : रवि लामिछाने दोषी की निर्दोष ? आयो यस्तो भिडियो
कन्या : कन्या राशिका लागि यो महिना संघर्षमय रहनेछ । शत्रु पक्ष सबल रहनेछन् । खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ । सामाजिक कार्यम रुचि जाग्नेछ । अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा प्रगति हुने देखिन्छ । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्र सजग रहनु नै उत्तरम हुने छ । पारिवारिक साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ । कृषि कार्यमा विशेष लाभ रहनेछ । धार्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन् ।
तुला : तुला राशिका लागि यो महिना यात्रामयी रहनेछ । शत्रुपक्ष सबल रहने भएकाले कार्यमा सजगता अपनाउनु नै उचित हुनेछ । बोलिको विशेष प्रभाव रहनेछ । कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै आर्थिक उन्नति हुने देखिन्छ । प्रेममा सफलता मिल्ने देखिन्छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । शत्रु पराजित हुने छन् । व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : वृश्चिक राशिका लागि ज्येष्ठ महिना फलदायी रहनेछ । खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यात्राका अवसरहरू पनि प्रशस्त देखिन्छन् । अध्ययन अध्यापको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । शत्रु पराजित हुने छन् । व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुने देखिन्छ । नयाँ कार्य प्राप्तिका योग देखिन्छन् । स्वास्थ्य सबल रहनेछ ।
धनु : धनु राशिका लागि यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ । यात्राका विशेष योग देखिन्छन् सोचेका काम बन्ने छन् । व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ । कार्य प्राप्तिको योग देखिन्छन् । सामाजिक कार्यमा अभिरुचि रहनेछ । अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा प्रगति हुने देखिन्छ । शत्रु पराजित हुने छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सजग रहनु उपयुक्त हुनेछ । प्रेम जीवन सफल रहने देखिन्छ ।
मकर : मकर राशिका लागि यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ । सामाजिक क्षेत्रबाट मान सम्मान मिल्नेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट पनि लाभ हुनेछ । प्रेम जीवन सुखद् रहने देखिन्छ । सन्तान सुखका साथै व्यापार व्यवसायबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ । शत्रु पक्ष सबल रहनेछन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष सजग रहनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बोलीमा पनि सजग रहनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : शिल्पा पोखरेललाई तत्काल नपक्रन सर्वोच्चको आदेश
कुम्भ : कुम्भ राशिका लागि ज्येष्ठ महिना लाभदायी रहनेछ । पारिवारिक सुख मिल्ने देखिन्छ । मित्र प्राप्तिका साथै कार्य लाभका योग देखिन्छन् । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम छ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक उन्नति हुने देखिन्छ । सुखद् यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । विद्याबाट लाभ हुनेछ ।
मीन : मीन राशिका लागि ज्येष्ठ महिना उन्नतिकारक रहनेछ । यात्राका विशेष योग देखिन्छन् । बोलीको प्रभाव रहनेछ । व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै विशेष लाभ हुने देखिन्छ । मित्र जनबाट साथ सहयोग मिल्नुका साथै कीर्ति वृद्धिको योग पनि देखिन्छ । आफन्त एवं परिवारजनबाट पनि विशेष लाभ हुने छ । शत्रु पराजित हुनेछन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने देखिन्छ ।
के हो कस्मेटिक सर्जरी ? के-के को गर्न सकिन्छ ?